DHAGEYSO WAREYSI: Kudhawaad 100 qof oo Soomaali ah oo laga soo musaafurinayo dalka Mareykanka (Maxayse galabsadeen?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO WAREYSI: Kudhawaad 100 qof oo Soomaali ah oo laga soo musaafurinayo...
DHAGEYSO WAREYSI: Kudhawaad 100 qof oo Soomaali ah oo laga soo musaafurinayo dalka Mareykanka (Maxayse galabsadeen?)
Minnesota (Halqaran.com) – Dowladda Mareykanka ayaa qorsheyneysa in maalmaha Khamiista iyo Jimcaha foodda nagu soo haya ay dalkeeda ka soo musaafuriso ku dhawaad 100 qof oo muwaadiniin Soomaali ah, kuwaasi oo dib loogu soo celinayo dalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ee dadkooda laga soo tarxiilayo Mareykanka ayaa u xaqiijiyay arrintaasi qareennada u doodaya dadkooda ku jira Xabsiga, kuwaasi oo qaarkood la sheegay in lagu helay dambiyo kala duwan.
Soomaalida laga soo musaafurinayo dalka Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in ay ku jiraan dad aan wax dami ah gelin, balse loo diiday in qaxootinnimo loo qaabilo, ama deganaanshaha Mareykanka la siiyo.
Hay’adda lagu magacaabo Cair oo ah hay’ad u doodda xuquuqda Muslimiinta dalka Mareykanka qeybta Minnesota ayaa waxay walaac xooggan ka muujisay Soomaalidan laga soo tarxiilayo dalka Mareykanka.
⇨Halkan ka sii akhri Wararkeena kale ee Maanta oo Xiiso Leh
Jeylaani Xuseen oo ah madaxda hay’adda Cair oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay, in dadkaan loo haysto arrimo kala duwan, islamarkaana ay u badan yihiin dad aan wax sharci ah ku heysan dalka Mareykanka.
“Dambiyada lagu haysto waa dambiyo kala duwan, inta badan waa sharci la’aan, waa dad sharcigii dalbaday oo sharcigii loo diiday ayaa ku jira dadka hadda la musaafurinayo” ayuu yiri madaxa hay’adda Cair Jeylaani Xuseen.
Hooyo Maryama oo ka mid ah dadka carruurtooda laga soo musaafurinayo dalka Mareykanka ayaa sidoo kale VOA-da u sheegtay, inay aad uga murugeysan tahay arrintaan. Waxayna sheegtay in wiilkeeda aan aqoon sababta Soomaaliya loogu tarxiilayo, isagoon wax dambi ah sameynin.
Sidoo kale, Hooyadaan Soomaaliyeed ayaa sheegay, inay aad uga murugeysan tahay carruurta ay Ayeeyada u tahay ee Aabahooda Soomaaliya loo musaafurinayo, balse aysan ogeyn waxa ay sameyn doono.
Haddaba Halka hoose ka dhageyso Wareysiga Mr. Jeylaani iyo Hooyo Maryama:
Soomaali laga soo musaafurinayo Mareykanka